Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. - News: Gudoomiye Ku Xigeenka Jabhadda ONLF Maxamed Ismaaciil oo Dhanbaal Diray.
December 12 2013 04:48:07
Gudoomiye Ku Xigeenka Jabhadda ONLF Maxamed Ismaaciil oo Dhanbaal Diray.
June - 25 2012
Isniin (Ogadentoday Press)- Waxaan marka hore waxaan mahad iyo amaan u soo jeedinayaa jaaliyadaha Ogadenya ee dalka Australia, iyo Yurub oo si isku waqti ah dagaal ay ku guuleysteen kula jiray cadowga wax ma gartaha ah. Jaaliyadda Ogadenya ee dalka Australiya waxay burburisay qorshe dhagareedkii Woyanuhu u soo dhiibay mujrimiinta miciyaha dhiiga ku leh, sida oo kale Jaaliyadaha Yurub waxay isla waqtigaa ka wadeen mudaaharaad ay Yurub iyo caalamkaba gu muujinayeen gabood falka ka jira Ogadenya iyo gargaarka ay siiyaan in loo adeegsado gumaadka shacabka aan wax galabsan.
Halganka xaqa ah ee shacabka geesiga ah ee Somalida Ogadenya ugu jiraan aayo ka talintooda wuxuu marayaa marxaladii u dambaysay ee albaabka xorriyadda. Waxaa is qabsaday ka gir ka gir dagaalka cadowga lagula jiro dibad iyo gudaba. Dagaalka dibadda waxaa wada jaaliyadaha kuwaas oo ka dhacsiiyey xaqnimada halgankooda iyo qaddiyadda dalalka ay joogaan. Dagaalkaas gaamuray waxaa lagu taageerayaa loona dheeli tirayaa halganka gudaha ee CWXO horseedayo. Waxaa looga aarayaa gumaadka iyo xasuuqa ay ku hayaan dagaal dambiilayaalka Meles Zenawi shacabka aan wax galabsan ee birma gaydada ah.
Halganku waa mid gaamuray, CWXO geesiga ah ayaa ka gacan sareeyo cadowga iyo kalkaalayaalkiisa, dibad iyo gudaba. Sida loo curyaamiyey waxaad ka garan kartaa xaaladda siyaasad, dhaqaale, ciidan iyo bulshaba ee cadowga maanta haysata: Waxaa maxfalada caalamka, sida UN, EU, laga doodayaa xidhiidhka Itoobiya iyo gargaarka la siiyo inay u adeegsanayaan arrimo ciidan dadka lagu gumaado iyo in kale. Waxay su'aashaasi timid markii la ogaaday arrintaas saxnimadeeda. Waxaa hoos u dhacay wax soo saarkii, dagaalka Ogadenya ka jira awgeed, kharashka ku baxaya ayaa baajedka xukuumadda la dhacay. Xoogsatadii iyo beeralaydiina ciidan ayaa laga dhigay ka dagaalama Ogadenya, iyo burburka kale ee weheliya. Waxaa dalka laga la'yahay waxyaalaha noloshu u baahan tahay, sida saliida, shidaalka, burka, iwm. Taasina waxay dhalisay inay inta yar ee taala qiimahooda la goyn waayo. Arrintaas dhaqaale xumada ah waxay keentay in dhul beereedkii iyo degaanadii dadku xoolaha ku dhaqan jiray dalal shisheeye laga kireeyo muddo dheer, iyo in ummadda Somaliyeed si qasab ah lacago looga urursado. Dagaalka ciidan ee ka socda Ogadenya kumayna